Maxaad kala Socotaa Magaalada ee u Baxsadeen Inta ugu Badan Saraakiisha iyo Madaxda Al-Shabaab iyo Al-Qaacida? - iftineducation.com
iftineducation.com – Degmada Ceelbuur ee gobalka Galgudud ayaa xilligaan waxaa si xad dhaaf ah ugu guuraya Al-shabaab iyo taageerayaashooda oo isaga soo hayaamaya magaala xeebeedka Kismayo ee xarunta u ah gobalka J/hoose oo ay kusii siqayaan ciidamada AMISOM iyo Dowlada Soomaaliya.
Warar lagu kalsoonyahay oo laga helay shacabka ku nool Ceelbuur ayaa waxa ay sheegayaan in gaadiid fara badan oo wada qaxooti naftooda kala soobaxsaday Kismaayo maalin waliba ay gaaraan halkaasi, iyada oo inta badan gaadiidkaasi ay lasocdaan Caruur iyo Haween si toos ah looga soo qaaday Kismaayo.
Qulqulkaan Al-shabaab iyo taageerayaashoodu ay kutegayaan Ceelbuur ayaa waxa uu dhaliyay sara ukac qiimaha guryaha lagu kireesto ah, waxaana qiimaha qolka lagu dego bishii uu xilligaan marayaa $50 iyada oo markasta lafilan karo qiima koror.
Sidoo kale magaalada waxaa kubatay gaadiidka raaxada oo u badan nuuca kaaribta loo yaqaanno oo ay wataan dagaalyahannada Shabaabka iyo saraakiisha sar sare oo iyaga inta badan lageeyo goobaha amaanka lagu tuhmayo si ay uga fogaadaan bartilmaameedka, iyada oo waayihii danbe ay jireen diyaarada Dalka Kenya laga leeyahay oo goobaha lagu tuhmayo Shabaaka duqeeya.
“gaadiidka Kismaayo kasoo qaada ayaa toos u keena Ceelbuur, ceelbuur xilligaan waxa ay isu bedeshay meel dadkeedu badanyahay, dad aan afsoomaaliga aqoon ayaa kujira dadka lagu arkayo”, sidaa waxaa u sheegay Shabakadaan Maxamed Omar oo Ceelbuur kunool.
Waxa uu intaa kudaray in Al-shabaab xilligaan aysan shacabka degmadaasi dhibaata kuheyn sidoo xilliyadii hore isaga oo taana kumacneeyay Shabaabka oo doonaya hadiiba ay maalma halkaan kusoo gaban karaan in aysan lakulmin kacdoon Shacab.
Waraka qaar aan laxaqijin waxa ay sheegayaan in dhamaan ragii lagu daray liiska argagaxisada ee Soomaaliya joogay ay kuluga aruursadeen Degmada Ceelbuur maadmaama ay cirif kajirto goobaha xilligaan hardanka colaadeed kajiro, iyaga oo sida lasheegay quud dareynaya in hadii Xaaladu Xumaato ay u sii dhawaadaan dhanka xeebta.
Dowlada Mareykanka ayaa horay waxa ay usoo saartay liis ay kujiraan Masuuliyiinta Shabaabka oo lacag aad u badan ladul dhigay, waxaana intas wixii kadanbeeyay yaraday in si caadi ah loo arko ragii liiskaasi lagu daro, waxaana wararkaani ay imaanayaan xilli Shabaabku sii luminyaan gooba muhiim u ahaa oo ay kudhuumaaleysan kareen raga lacagtalagu doondoonayo ee madaxoodu uu qaaliga noqday.
Madaxdan Baxsadka ah Waxa la sheegay in ay laheshiiyeen dadka deegaanka oo ay horay u dhibaateyn jireen ,Shacabka qaarkod waxa ay kumacneeyeen heshiiskas mid shabaabku ay kudoonayaan in ay isaga jeediyaan shacabka maadaama ay soo yaraadeen goblada Shababku uu xornimada ugu dhaqdhaaaqi karo.